Ejiri nlezianya Kovid-19 na ụgbọ okporo ígwè njem! | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraEjiri nlezianya Kovid-19 na ụgbọ okporo ígwè njem!
18 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Turkey
Ihe mgbochi coronavirus weere na ụgbọ oloko
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu mere nkwupụta maka mgbasa ozi na Lapseki, ebe ọ gara maka emume ịtinye ngọngọ ikpeazụ na nchara ụlọ elu Çanakkale Bosphorus Bridge.
N'ịkọwa ọrụ ya maka oge ọhụrụ, Karaismailoğlu kwuru, sị: “Anyị arụchaala ihe owuwu okporo ụzọ na mba a. Emechara akụrụngwa nke ụgbọ elu. Anyị nwekwara ụkọ okporo ụzọ. Anyị ga-elekwasị anya na ụgbọ okporo ígwè na oge na-abịa. Anyị nwere network dị puku kilomita iri na abụọ ugbu a. Mgbe anyị buliri netwọ ụgbọ okporo ígwè ọsọ ọsọ nke narị kilomita 12 ruo puku ise na narị ise, a ga-eji okpokoro arụ ọrụ dị puku kilomita iri na asaa. Mgbe ahụ, anyị ga-etinye larịị azụ dị na mpaghara ndị mepere emepe ma jikọta ike akụ na ụba na njem ibu. ”
"Ihe mmeghari nke inye mba na Signgba ingbọ Eserede na Speedzọ Ọgba Ọsọ na Uzo Obodo"
Karaismailoğlu mere ka ọ pụta ìhè na enwere ihe mgbazi na mbido mba ma n'okporo ụzọ ụgbọ elu ma n'okporo ụzọ obodo ahụ, ma kwupụta na ndụ mba ga-agbanwe mgbe ọrịa coronavirus na-ekwu, na ha adịla njikere dịka ozi, ma kwupụta mkpachara anya ndị ewere n'ime ụgbọ oloko ahụ:
"A ga-enwe oche oche efu maka ahụ ike n'azụ ụgbọ oloko"
“Insgbọ oloko ga-arụkwa ọrụ n'ike pasent 50. A ga-enwe oche na-enweghị isi maka ahụike na azụ. Nkwado akụ na ụba na akọnuche dị mkpa maka nwa amaala iji mụọ oge ọhụrụ. Ọ dị mkpa ịchụ ihe ụfọdụ n’uche iji nwetaghachi ha. Dabere na nyocha ahụ, anyị enweghị ike ijide ọnụọgụ Jenụwarị n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ elu ọbụna n'oge a n'afọ na-esote. Enwere ihe oyiyi yiri ya na ụgbọ oloko ahụ. Ndụ mba ga-agbanwe ugbu a. Enwere m olileanya na ọ ga-akwụsị ozugbo o kwere omume. ”
N'inye ozi ebe a na-ewugharị saịtị ndị ahụ n'oge a na-efe efe, Karaismailo ,lu kwuru, sị, “E mepụtara gburugburu ebe obibi dị mma na ebe dịpụrụ adịpụ. Etinye ego nke ihe owuwu na ntinye ego di omimi na-aga n’ihu. Ọ na-ewetara nnukwu akụ na ụba akụ na ụba. Mgbe anyị kwụrụ ụgwọ ahụ, ọ na-agbadata n'ụlọ ahịa ebe a na-arụ ọrụ ahụ. ”
Ụgbọ njem njem na Line BTK Railway Line
Mgbatị nke Ngalaba Ọrụ Ọrụ Ọha maka Ụgbọ njem Ụgbọ okporo ígwè
Ọnụ ọgụgụ ndị njem kwa ụbọchị nke ụgbọ oloko na-agba oke ọsọ
Ụzọ ụgbọ okporo ígwè maka njem ụgbọ njem nke TCDD
Ụgbọ njem ndị njem na BTK Line amalite afọ a
Minista Turhan: Yak Ọnụ ọgụgụ nke ndị njem nke YHT bugara na 44 Million Bakan
Maka Transportgbọ njem Ndị njem na Poland-Ukraine-Russia 2012 European Champions Championship…